Fiovana governemanta ao Shily: Ny fiverenan’ny fanantenana (marefo) · Global Voices teny Malagasy
Hitaky vokatra ny olompirenena rehefa hanombana ny prezidansan'i Gabriel Boric
MpanoratraNicolás Lazo Jerez
Voadika ny 18 Janoary 2022 5:53 GMT
Vakio amin'ny teny English, Esperanto , عربي, Ελληνικά, українська, Español
Sarin'i Gabriel Boric raha nanao ny kabarim-pandresena tamin'ny taona 2021. Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
Asa makadiry raha miohatra aminy no miandry an'i Gabriel Boric, vao voafidy ho filohan'i Shily mandritra ny fotoana 2022-2026. Manomboka amin'ny 11 marsa, fotoana hanoloran'ny filoha Sebastián Piñera mitondra amin'izao fotoana izao ny fitondrana ny governemanta aminy, dia hiatrika ny fandrahonan'ny COVID-19 mbola mihatra mandraka androany, ny toekarena simban'ny fitohizan'ny fisondrotry ny vidim-piainana ary ny fe-potoana ara-politika vaovao izy—hohavaozina ihany koa manko amin'io fotoana io ny parlemanta—izay tsy nahazoana ny maro an'isa hiantohana ny marimaritra iraisana midadasika kokoa. Hisedra fahasarotana noho ny fahitana ny zavamisy noho izany ny fanantenana ao amin'ny mpifidy an'i Boric.
Ambonin'izany rehetra izany, misy ihany koa ireo fanamby ara-drafitra tsy mety voavaha ao amin'ny firenena, toy ny trosan'ny tanora mpianatra any amin'ny oniversite, ny tsy rariny amin'ny fahazoana fitsaboana, ary ny tsy fahombiazan'ny rafitra kilasimandry an'ny tsy miankina izay napetrak'i Augusto Pinochet an-tery nandritra ny didy jadona sivily-miaramila nampihariny, ankoatra ireo olana hafa maro. Ho hafa mihitsy noho izay fantatr'i Boric hatramin'izao fotoana izao ny hasarotry ny asa miandry azy.
Nitranga tao anivon'ny dingana fizahan-kevitra hanavao ny lalampanorenana, izay voapika tamin'ny alalan'ny fitsapan-kevi-bahoaka taorian'ny krizin'ny oktobra 2019, fotoana nidinan'ny shiliana an'arivony an-dalambe hitaky ny dina sosialy vaovao ny fanentanam-pifidianana ho filoham-pirenena. Nahazo ny toeran'ny filoham-pirenena i Gabriel Boric, misolotena ny vondrona ankavia Apruebo Dignidad tamin'ny fihodinana faharoa tamin'ny alahady 19 desambra 2021 raha nahazo ny 55,87 isanjaton'ny vato, raha mitaha amin'ny 44,13 isanjaton'ny vato ho an'ilay tendrony ankavanana ilay depiote teo aloha José Antonio Kast, izay manohitra mafy ny hananganana izany lalampanorenana vaovao izany.
Zavatra iray na roa loha no fantatr'ity filoha voafidy 35 taona ity amin'ny fiatrehana sedra mafy. Folo taona lasa tany ho any izay, niaraka tamin'ireo mpitarika hafa, nitarika ny hetsiky ny tanora mpianatra maro mpanaraka nitaky fanabeazam-bahoaka tsara sy malalaka tamin'i Piñera, izay tao anatin'ny fe-potoam-piasana voalohany amin'ny maha-filoha azy tamin'izany fotoana izany izy. Ankehitriny, nandritra ny fizarana farany amin'ny fe-potoana faharoa amin'ny maha-depioten'ny faritra atsimon'i Magallanes azy, nahavory sonia haingana tsy nisy toa izany i Boric ho fanohanana azy ho kandidà filoham-pirenena, nandresy tamin'ny savaranonandro izay tsy izy no “favori“, niaritra tsy niraharaha ny fanafihan'olona sy vaovao hosoka avy amin'i Kast izy, ary nandresy tamin'ny fihodinana faharoa tamin'ny elanelam-bato manodidina ny iray tapitrisa rehefa izy no nitana ny laharana faharoa tamin'ny fihodinana voalohany, ka lasa filoha tanora indrindra sy nahazo vato betsaka indrindra teo amin'ny tantaran'i Shily.
Noho ny fahitana an'i José Antonio Kast mampiseho ny fihetseham-po maha pro-Pinochet azy, sy ny fomba fijeriny miiba, mbamin'ireo miray dia aminy, momba ny vehivavy sy ny fimaroana ara-pananahana, dia nisy fitoviana tamin'ny fisaraham-bazana nandritra ny referendum namarana ny fitondran'i Pinochet tamin'ny 1988 ny hazakazaka farany tamin'ny fanentanam-pifidianana tamin'ity indray mitoraka ity. Telopolo taona mahery taty aoriana, tena mitovy mihitsy ny fitsinjarana ny vato sy ny safidy roa tamin'izany fotoana izany ny tamin'ity fotoana ity. Noho izany toe-javatra izany, tamin'ny 19 desambra, avo roa heny ny hafalian'ny mpifidy an'i Boric, andaniny tamin'ny fandresena tamin'ny fifidianana, ankilany amin'ny fihemoran'ny fandalàna nentin-drazana vaovao mpandrendri-bahoaka araka ny fanaon'i Trump sy Bolsonaro.
Taorian'izany alim-pientanentanana izany, raha noresahan'i Boric ny momba an'i Salvador Allende teo anoloan'ireo vahoaka niangona teo afovoan-tanànan'i Santiago, dia nahazo vahana ny tebiteby amin'ny fiovana ho avy sy ireo onjam-panantenana hotantanin'ny filoha voafidy amim-pitandremana fatratra. Na izany aza dia efa vaovao tsara eo anivon'izao loza sy atambo maro izao raha niverina ho voambolam-bahoaka ny fanantenana. Ao anaty vanim-potoanan'ny valan'aretina, krizy ara-toetrandro, famindran-toerana an-katerena ary ireo voina hafa mahaketraka ny olombelona, aleon'ny shiliana tetikasa politika mitady hoavy tsaratsara kokoa, toa izay manohana kabary voabahan'ny tahotra fahavalo tena misy na saintsainina avy ao an-toerana na avy any ivelany.
Mazava loatra fa tsy ampy ny mampiseho fotsiny ny lalana mankany amin'ny nofinofy. Fa raha mandiso fanantenana i Boric amin'ny tetikasam-pitsinjarazarana nolazainy, tafintohina hatrany amin'ny lazaina ho teboka mampalemy azy—heloka bevava an-tanandehibe, trafikan-drongony sy fampihorohoroana ao amin'ny Faritra Araucanía—na tsy dia mankaiza loatra ny governemanta tantaniny, dia ho tena lalina ny fahadisoam-panantenana ary hampiseho ny fahalemeny ny fanantenana. Izay mihitsy no ho tany lonaka handraisan'ny kabarin'i Kast faka: fampanantenana hamerina amin'ny laoniny indray ny “antanantohatra very” izay mampiady hevitra sy lazaina ho fitiavan-tanindrazana amin'ny fomba manokana ary mpilaza ny fanoharana, miverimberina matetika indrindra nandritra ny taompolo 90, manondro an'i Shily ho “mpifanolo-bodirindrina tsara ao amin'ny mpiara-monina ratsy”.
Eo amin'ny ambaratongam-paritra indray, ny fahatongavan'i Gabriel Boric no azontsika anantenana ny fahazoan'ny havia malefaka niarahan'ny filoha shiliana teo aloha Michelle Bachelet sy ilay nipoitra indray Luiz Inácio da Silva tanjaka, izay tsy navelan'ny fisaviliviliana politika hahazo fahefana tao anatin'ny dimy taona farafahakeliny. Andrasana ihany koa ny fampiroboroboany mafy ny diplaomasia « turquoise », izay antsoina hoe tetipanoron'ny faharetana manambatra ny fiarovana ankapobeny ny ala sy ny ranomasimbe, ary tsy toy ireo filoham-panjakana liam-pandrosoana hafa, fa tsy misalasala izy manameloka tanteraka ny fanitsakitsahana zon’olombelona ataon'izay governemanta manao izany na iza na iza, anisan'izany, araka ny efa nataony, ireo milaza ho elatra havia.
Manampy izany, Ny zava-drehetra no manondro fa ho mpitarika manaja ny andrimpanjakana sy ny fifandraisan'ny firenena maro ao amin'ny faritra izy, toetsaina fifampiresahana izay efa nasehony tao Shily. Porofon'izany ny zavatra nataony voalohany indrindra tamin'ny maha-filoha voafidy azy dia ny arofenitra fandraisana azy tao amin'ny lapan'ny La Moneda, izay nandraisan'ny filoha izay notsikerainy fatratra noho ny fitarihany nandritra ny fikorontanana ara-tsosialy tamin'ny taona, ary avy eo ny fitsidihany ny foiben'ny Fihaonambe Fanapahana ara-Dalapanorenena, izay nanoloran'i Boric antoka fanohanana sy fizakantena.
Na dia sarotra kokoa noho ny fomba fijery Manicheénne mahazatra ao amin'ny media sosialy aza, ho mafy fandona ny olompirenena anjotra rehefa avy ny fotoana hanombanana ny prezidansan'i Gabriel Boric. Miankina aminy sy ny ekipam-pitantanany, ao anatin'ny efa-taona, ny tsy ijerena azy ao anaty voambolana fanatsotsorana tahaka izany. Efa fantatsika ihany koa fa mety ho fohy andro ny sitraka volantantely iainan'ny filoha-voafidy malaza. Mihoatra noho izany fomba fijery mitongilana araka ny olona tsirairay izany, ny tena fahombiazana dia ao amin'ny fahaiza-mitantan'ny mpitarika vaovao, araka ny nampanantenaina nandritra ny fanentanana, hahafahan'ny shiliana misitraka fiainana tsara kokoa.